Fivarotana trano Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
Fivarotana trano in California
Fivarotana trano in Rancho
Fivarotana trano in Orange Walk
Fivarotana trano in Delhi
Fivarotana trano in Noida
Fivarotana trano in Uttar Pradesh
Fivarotana trano in Chicago
Fivarotana trano in Illinois
Fivarotana trano in Indi
Fivarotana trano in Karnataka
1 - 10 ny 37 Listings
Navoakan'i Juiste Makelaar
View Fivarotana trano Published 4 months ago
Navoakan'i Vic Markarian
View Fivarotana trano Published 10 months ago
View Fivarotana trano Published 11 months ago
View Fivarotana trano Published 1 year ago
Navoakan'i NorthBrick Venture
View Fivarotana trano Published 2 years ago
Navoakan'i Bill Bird
Mpivarotra trano sy mpivarotra trano fivarotana trano (matetika antsoina hoe trano fivarotana trano) dia olona manao asa anelanelan'ny mpivarotra sy mpividy mpivarotra trano / fananana ary manandrana mampitaha ireo mpivarotra maniry hivarotra sy mpividy maniry ny hividy. . Tany Etazonia dia tany am-boalohany ny fifandraisana dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fitsipiky ny lalàna mahazatra an'ny masoivoho anglisy, miaraka amin'ilay mpampindram-bola manana fifandraisana tsy fivadihana amin'ny mpanjifany. Matetika ny mpivarotra trano fivarotana dia manome vola antsoina hoe vaomiera amin'ny fahombiazana mifanentana amin'ny tranon'ny mpivarotra amin'ny mpividy iray. Ity vaomiera ity dia azo zaraina miaraka amin'ireo mpivarotra mpandray anjara amin'ny orinasa hafa na mpandray anjara rehefa azo ampiharina. Ny mpandraharaha iray, izay teny ampiasaina any Angletera, dia olona na orinasam-barotra izay ny orinasan-dry zareo dia ny fivarotana trano fananana ho an'ny mpanjifa. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny hetsika, ny fahefana, ny adidy ary ny andraikitr'ireo mpiasan'ny mpandraharaha sy ny orinasa amin'ny firenena tsirairay. Ny firenen-kafa dia manakaiky ny fomba fiasa samy hafa amin'ny fivarotana sy ny fivarotana fananana. Any Etazonia, kosa, ireo mpanafika trano sy mpivarotra izay manampy ny tompona amin'ny varotra, mivarotra, na manofa fananana dia antsoina hoe "brokers List" ary "agents agents."  Ny lisitry ny mpivarotra sy ny mpandraharaha dia mikatsaka ny an-tsena sy hivarotra na hanofa fananana amin'ny vidiny ambony indrindra eo ambanin'ny fe-potoana tsara indrindra. Ny mpivarotra sy mpandraharaha hafa dia mety mifantoka amin'ny fisolokiana mpividy na mpanofa trano. Na izany aza, ny fahazoan-dàlana amin'ny maha broker na mpivarotra dia manome alàlana ny fahazoan-dàlana hisolo tena fety amin'ny lafiny roa amin'ny fifanakalozana. Ny safidy izay ilana azy misolo tena dia fanapahan-kevitry ny orinasa ho an'ny fahazoan-dàlana.